सरकारले भूकम्प पीडितको चामलपनि बेच्ने ? – ABC KHABAR
सरकारले भूकम्प पीडितको चामलपनि बेच्ने ?
April 10, 2016 ABC Khabar अर्थ
काठमाडौं, २८ चैत । भूकम्प गएको वर्ष दिन पुग्न अब करिब १५ दिन पुग्नलाग्दा सरकारले भने १० महिना अघि पीडितकालागी राहत आएको चामल गोदामबाटै बेच्न लागेको खुलासा भएको छ । बंगलादेश सरकारले भूकम्पपीडितका लागि भनेर दिएको ७८ हजार क्विन्टल चामल १० महिना गोदाममा थन्क्याएर सरकारले बेच्ने तयारी गरेको हो ।
आपूर्ति मन्त्रालयले केही दिनअघि खाद्य संस्थानलाई बंगलादेशबाट आएको ७८ हजार २ सय ९५ क्विन्टल परिमाणको चामल बिक्री गर्न भन्दै पत्राचार गरेपछि अब भूकम्प पीडितले उक्त राहतको चामल नपाउने भएका छन् । खाद्द संस्थान संचालक समितिको बैठक बसेर चाँडै यो चामलको मूल्य निर्धारण हुने संस्थानले जनाएको छ । संस्थानका महानिर्देशक शिवहरि श्रेष्ठले बंगलादेशबाट आएको चामल बिक्री गर्न भन्दै आपूर्ति मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको बताए । यसको मूल्य भने निर्धारण हुन नसकेको उनको भनाइ रहेको छ ।
‘ढुवानी तथा संचालन खर्चको हिसाब गरेर हामी केही दिनमै मूल्य निर्धारण गर्छौँ, बाहिरभन्दा सस्तो दरमा सर्वसाधारणले यो चामल किन्न सक्नेछन्’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने । संचालन तथा ढुवानी लागतका सम्वन्धमा भने उनले हिसाब सुनाउन चाहेका छैनन् । उनले भने, ‘३३ प्रतिशत शुल्क थप गरेर बिक्री गर्ने हाम्रो प्रस्ताव हो, जसमा ढुवानी तथा लोड÷अनलोड लागत समावेश हुन्छ ।’
संचालक समितिको बैठक कहिले बस्ने भन्ने बारेमा समेत अहिलेसम्म मिति तय हुन सकेको छैन । ‘केही दिनमै बस्ने समितिको बैठकमा संचालनको स्पष्ट खर्चको लेखाजोखा हुन्छ, त्यहीअनुसार चामलको मूल्य निर्धारण हुन्छ’ उनले भने।
चामलको मूल्य तोकेर बिक्री गर्ने वा भूकम्पपीडितलाई दिने भन्ने सम्वन्धमा मन्त्रालयस्तरीय निर्णय हुन नसक्दा चामल धेरै समयसम्म गोदाममा थन्किएको उनले बताए । यसअघि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत पीडितका लागि आएको चामल पीडितलाई नै वितरण गर्न दवाव दिएको थियो । यद्यपी यो चामलको बिक्रीबाट आएको रकम ‘आपतविपत कोष’मा जम्मा गरिने संस्थानले जनाएको छ।
संस्थानका प्रवक्ता पवनकुमार कार्कीका अनुसार चामलको मूल्य प्रतिकेजी ४०÷र४२ रुपैयाँको हाराहारीमा हुनेछ । सामान्यतः प्याकिङ गरेको ९ देखि १२ महिनासम्मको चामल प्रयोगका लागि उपयोगी मानिन्छ । गोदाममा थन्किएकै १० महिना भइसकेको चामलको प्याकिङको मिति भने स्पष्ट नहुँदा चामलको गुणस्तरियतामा समेत प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । प्रवक्ता कार्कीले भने स्ट्रिम गरिएको चामल भएको भन्दै यसको गुणस्तरीयतामा कमी नआएको दावी गर्छन्। ‘चामलको मितिभन्दा पनि त्यसको स्टोरेज कसरी गरिएको हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ’ उनले भने ‘यो चामल तत्काल नै प्रयोग गर्नुपर्ने वा मिति सकिने खालको होइन ।’
गत जेठको अन्त्यतिर बंगलादेशले पठाएको चामल काठमाडौं, बिर्तामोड, लाहान र पोखरास्थित संस्थानका गोदाममा थन्किएको छ। सबैभन्दा धेरै चामल बिर्तामोडमा ६१ हजार ६९ दशमलव ५०, काठमाडौंमा १६ हजार ३ सय ९० दशमलव ५०, लाहानमा ३ सय ३५ र पोखरामा ५ सय क्विन्टल चामल थन्किएको छ ।
उदयपुरमा आगलागीबाट २८ लाखको क्षति
रविन्द्रको पहिलो म्युजिक भिडियो रिलिज हुँदै (भिडियो सहित)